ဇော်မင်းစိုး(ကုန်းဇောင်း)၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
Magway Division, Pwint Phyu Township,Konzaung
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည် ဇော်မင်းစိုး(ကုန်းဇောင်း)'s၏ '" အတတ်ပညာ တစ်ဆယ့်ရှစ်ပါး "'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်ဇော်မင်းစိုး(ကုန်းဇောင်း)'s ၏ '" ဗောဇ္ဈင်သုတ် ရွတ်ဖတ်တဲ.အခါ ဗောဇ္ဈင် ( ၇ ) ပါး ကို နားလည်အောင်လေ့လာပြီးမှ ရွတ်ဖတ်စေချင်ပါသည် " အပိုင်း ( ၃ )' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်ဇော်မင်းစိုး(ကုန်းဇောင်း)'s ၏ 'အိမ်ရှင်ဘာသာဝင်တွေနဲ့ တည့်အောင်နေဖို့လို By သီတဂူဆရာတော်' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဇော်မင်းစိုး(ကုန်းဇောင်း) သည်thein wai's ၏ 'တရားဓမ္မနဲ့ တည့်အောင်နေ။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Thet Mar သည်ဇော်မင်းစိုး(ကုန်းဇောင်း)'s ၏ '" တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ "' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
သဒ္ဓါဖြူ သည်ဇော်မင်းစိုး(ကုန်းဇောင်း)'s ၏ 'အမြတ်ဒေါသကိုဖြေလျော့ပါ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
သဒ္ဓါဖြူ သည်ဇော်မင်းစိုး(ကုန်းဇောင်း)'s ၏ '" တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ "' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Mr.VC သည်ဇော်မင်းစိုး(ကုန်းဇောင်း)'s ၏ '" တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ "' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Thet Thet Aung သည်ဇော်မင်းစိုး(ကုန်းဇောင်း)'s ၏ '" တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ "' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
nyansoe သည်ဇော်မင်းစိုး(ကုန်းဇောင်း)'s ၏ '" တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ "' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
" တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ "
တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ " ရုပ် " နာတဲ့အပေါ်မှာ " စိတ် " ကလိုက်မနာအောင်လို့တရားအားထုတ်ရတာ။ " ရုပ် " နာတာကို " စိတ် "ကလိုက်နာနေလို့ရှိရင်တော့" ကိလေသာ " တွေပဲ ပွားနေမှာပဲ။ကြည့်လေ ၊ နေမကောင်းထိုင်မသာရှိလို့ " ဖြစ်ရလေခြင်း " လို့တွေးလို့ရှိရင် " သောက " တို့ ၊" ဒေါမနဿ " တို့ ၊ ဒါတွေပဲဖြစ်နေတာပဲမို့လား။ အဲဒီလို ခွာထားလိုက်လို့ရှိရင် သောကဆိုတာဖြစ်စရာမရှိဘူး။ ဒေါမနဿဆိုတာဖြစ်စရာမရှိဘူး။( ကိုးကား - တရားနာငြား ဥာဏ်စွမ်းအား တရားတော် ၊ ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ )_/i\__ . _/i\__ . _/i\__ ***** _/i\__ . _/i\__ . _/i\__See More
ဇော်မင်းစိုး(ကုန်းဇောင်း) သည် thein wai's၏ 'ဥပုသ်ရက်သတ်မှတ်ပုံနှင့် အနှစ်သာရ။'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မျှဝေခွင့်ပြုပါ။ ခန္ဓာတည်သမျှကာလပတ်လုံး သီလ သမာဓိ ပညာ သိက္ခာသုံးရပ်ဖြင့်ပြည်.စုံစွာ နေထိုင်ကျင့်ကြံပြီး နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေ။ _/\__ _/\__ _/\__"
ဇော်မင်းစိုး(ကုန်းဇောင်း) သည်thein wai's ၏ 'ဥပုသ်ရက်သတ်မှတ်ပုံနှင့် အနှစ်သာရ။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဇော်မင်းစိုး(ကုန်းဇောင်း) သည် သဒ္ဓါဖြူ's၏ 'ပန်းကြွေ ဘ၀ သံဝေဂ'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
ဇော်မင်းစိုး(ကုန်းဇောင်း) သည်သဒ္ဓါဖြူ's ၏ 'ပန်းကြွေ ဘ၀ သံဝေဂ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒီဘလော့ကို ဇန်န၀ါရီ 7, 2014 တွင်3:00am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments5Likes
တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ " ရုပ် " နာတဲ့အပေါ်မှာ " စိတ် " က
" ရုပ် " နာတာကို " စိတ် "ကလိုက်နာနေလို့ရှိရင်တော့
" ကိလေသာ " တွေပဲ ပွားနေမှာပဲ။
ကြည့်လေ ၊ နေမကောင်းထိုင်မသာရှိလို့ " ဖြစ်ရလေခြင်း " လို့
တွေးလို့ရှိရင် " သောက " တို့ ၊
" ဒေါမနဿ " တို့ ၊ ဒါတွေပဲဖြစ်နေတာပဲမို့လား။
ဒီဘလော့ကို အောက်တိုဘာ 19, 2013 တွင်5:52am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments3Likes
မြွေဟောက်တမျှ ၊ ထောင်းထောင်းထလျက်
ယှဉ်ဘက်စိတ်ဓါတ် ၊ ကိန်းဝပ်မိရာ
သတ္တ၀ါကိုပူလောင်စေခြင်း ၊ ဖျက်ဆီးခြင်း
မယွင်း ”ဒေါသ” သဘောတည်း။
ဒေါသကြီးမား ၊ လူမုန်းများ
ရန်များ ၊ ပြစ်များသည်။
၀ိပဿနာဥာဏ် ရင့်သန်စေရန်အကြောင်းတရား (၈) ပါး
ဒီဘလော့ကို အောက်တိုဘာ 19, 2013 တွင်5:36am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments2Likes
(၁) ဆရာသမားကောင်းကို အမှီပြုပြီးနေပါ။
(၂) အဲဒီဆရာသမားထံ ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မရှင်းလင်းတာတွေကို သင့်လျော်တဲ့အချိန်မှာ မေးမြန်းဆွေးနွေးပါ။
(၃) တစ်ကိုယ်တည်းနဲ့ စိတ်ကတည်ငြိမ်စွာ (ကာယ၀ိဝေက၊စိတ္တ၀ိဝေက) ဖြစ်အောင်နေပါ။
(၅) ကိုယ်ကျင့်တဲ့အကျင့်နဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ ဗဟုသုတရှိအောင် ဆည်းပူးအားထုတ်ထားပါ။
ဒီဘလော့ကို အောက်တိုဘာ 5, 2013 တွင်4:18am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments2Likes
ခန္ဓာငါးပါး ရရှိလာမှုကိုပဲ “ဘ၀” လို့ ပြောတာ။ ဒါကြောင့်မို့ လူ့ဘ၀ရလာပြီဆိုတော့ ဘယ်သူ့ရဲ့ဝန်ကိုထမ်းနေကြရတာလဲဆိုရင် ခန္ဓာ့ရဲ့ဝန်ကို ထမ်းနေကြရတာ။ ခန္ဓာ့ဝန်ကို ဘယ်လိုထမ်းနေကြရတာလဲ ၊ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ ။ မျက်စိအတွက် တာဝန်တွေထမ်းရတယ်။ နားအတွက် တာဝန်တွေထမ်းရတယ်။ နှာခေါင်း၊လျှာ၊ကိုယ်အတွက် တာဝန်တွေထမ်းရတယ်။စိတ် ဆိုတဲ့ သဘာဝတရားအတွက် တာဝန်တွေထမ်းဆောင်ရတယ်။ အထူးသဖြင့် ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ တာဝန်တွေက ပိုပြီးတော့ သိသိသာသာထမ်းရတယ်။…
3:16pm အချိန်ှဧပြီ 8, 2013, တွင် တာတာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
3:14pm အချိန်ှဧပြီ 8, 2013, တွင် တာတာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ကိုဇော်မင်းစိုး အိမ်ကိုညိမ၀င်လည်တယ်နော် အကို့မိတ်ဆွေဖြစ်ခွင့်ပေးပါနော
6:54pm အချိန်မတ် 7, 2013, တွင် မေချစ်ဦး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဘာကိုလွမ်းလို့ လွမ်းမိမလဲတော့ မသိဘူးး ပုံလေးကိုသဘောကျ လို့ ပို့ပေးလိုက်တာပါ...
3:32am အချိန်ဇွန် 30, 2012, တွင် ဆောင်းလေပြေ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
3:31am အချိန်ဇွန် 30, 2012, တွင် ဆောင်းလေပြေ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
At 2:05am on မေ 15, 2012, A BuddhismworldAdmin gave ဇော်မင်းစိုး(ကုန်းဇောင်း)agift…
2:04am အချိန်မေ 15, 2012, တွင် A BuddhismworldAdmin မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။